Maxay Isku Hayaan Oromada iyo Axmaaradu? Yaa se leh masuuliyada waxa kasocda Addis ababa. | ogaden24
Maxay Isku Hayaan Oromada iyo Axmaaradu? Yaa se leh masuuliyada waxa kasocda Addis ababa.
Magaalada Addis ababa waxaa maalinkii 3-aad kasocda Hardanka u dhexeeya Qomiyadaha Oromada iyo Axmarada kuwaasi oo maalinkii shalay ahaa uu dhex-maray iska Hor-imaad culus oo khasaare kala duwan Gaystay.
Waa marka 1-aad Labada Qomiyadood waxaa kadhexeeya Taariikh cadaawadeed oo soo Jireena Taasi oo Jiilba Jiil usii Gudbinayay, Oromada oo ah Tan mudada dheer dhabarka laga soo saaraa waxay Boqortooyoyinkii kala duwanaa ee Xabashidu ka Fara-maroojiyay dhul balaadhan oo magalada Addis ababa ugu Horayso, waxaana Haatan u muuqata Fursad ay kusoo ceshaan karaan dhamaan dhulkii horay looga dhacay oo Addis ugu Horayso.
Hadaba si Oromo u Gaadho Hadafkaasi Fog ayay bilaabeen Qorshe siyaasadeed ay Hanaankii Itobiya madaxa Minjo ugu Rogayaan, waxayna Oromo si aan leex-leexad lahayn u sheegeen inay tahay in labadalo dhamaan Astaamaha Qaranka, sida calanka Luuqada rasmiga ah ee dalka iyo magaca caasimada, waxaana dhamaan Astaamahaasi lagu badalaya kuwa Oromada maadaama ay iyagu yihiin tirada ugu badan dadka dalkaasi.
Oromada oo Guulo is daba Jooga Gaadhayay waxaa u muuqday in Talaabada koobaad ee isbadaladaas lagu Hirgalinayo lagu bilaabo soo dhowaynta Gudomiyaha Jabhada OLF, waxayna Oromadu meesha kasaareen calankii Itobiya kaasi oo ay kubadaleen calankooda gaarka ah ee Jabhada OLF oo dhamaan magalada Addis ababa ay ku camireen.
Talaabadaas waxaa si dhow ula socday siyaasiyiinta iyo bulshada Axmarada oo Todobaadyadii lasoo dhaafay oo dhan ay xiisad colaadeed kadhex taagnayd, waxayna bulshada Axmaradu si cad uga Hortagtay Hankii Oromada taasi oo keentay inay Labada bulsho isku Fara-saaraan magaalada Addis ababa.
Yaa masuul ka ah Qorshahan.
Qorshahan siyaasadeed waxaa si wada jir ah u Hagaya Hogaanka siyaasiga ah ee Qomiyada Oromada kuwaasi oo ku midaysan Helitaanka dawlad buuxda oo Oromo leedahay caasimadeeduna tahay Addis ababa, waxaana Hogaaminta Qorshahan Laf dhabar u ah Jabhada OLF, kuwaasi oo magaalada Addis ababa u Yaqaana magaca Finfine oo ah Af Oromo.
U jeedada kama dambaysta ah ee Oromada ayaa ah in Hadii sida ay Rabaan ay socon waydo inaysan jirin wax Itobiya layidhaahdo oo kadambeeya, waxaana diyaarsan mudaharaad balaadhan oo kadib marka uu yimaado Gudomiyaha Jabhada OLF lagu Qabanayo magalada Addis ababa kaasi oo lagu Taageerayo Helitaanka dal madax-banaan oo Oromo leedahay.
Qomiyada Axmarada iyada waxaa kago’an inay si Nabad Galya ah Talada dalka ugala wareegaan Abiy Axmed waxayna Qorshaynayeen in dorashada 2020-ka si Nabad ah lagu Gaadho, kadibna ay Oromada Kar-kaarka waydaariyaan iyaga oo kaashanaya Qomiyadaha kale oo Oromada u arka kuwo kahalis badan kooxdii TPLF, waxaa se muuqata in xaalku Gaadhay Matang meelaad doonaysay kuguma simo wax walibana ay isu badaleen si aan kutalagal ahayn.